Diblomaasiyada Adiss & Madaxweyne Farmaajo . W/Q Mahdi Muse | RBC Radio
Diblomaasiyada Adiss & Madaxweyne Farmaajo . W/Q Mahdi Muse
Posted on May 8, 2017 Maqaal, RBC, Wararka
Diblomaasiyada Adiss & Madaxweyne Farmaajo
Madaxweyne Farmaajo Adiss ayuu tagay. Safarkiisa waxaa ka horeeyay is faham la,aan u dhaxeysay asaga & Hoggaanka Adiss. ma ahan arinta Soomaaliya ee faro-galinta Aidss bes, ee waxaa u sii dheer in Doorashadi uu Farmaajo ku guuleystay ay Adiss si culus u taageertay Musharax Xasan Shiiikh oo la tartamayay Farmaajo.
Farmaajo hadda waa Madaxweyne. Adiss-na waa dal awoood & saameyn ku leh gudaha Soomaaliya. waxaa biyo kama dhibcaan noqotay in la is arko, oo la wada hadlo, sidaa darteeed Safarka Madaxweyne Farmaajo, waxaa qasbaya qaanuunka taagan ee xaalkaa ku dhisan. ma jiraan wax intaa dheeer ama macno goooni ku ah Madaxweyne Farmaajo.
Labada Hoggaamiye- farmaajo & Hailemariam Desalegn- waxay qabteen shir-Jaraaid. nuxurkiisu waxuu ahaa Iskaashi, wada shaqeyn & Ixtiraam in aan looga maarmeyn Diblomaasiyada Adiss & Muqdisho. waliba arintaa waxaa si ka sii xeel dheer uga hadlay Raisulwasaraha Itooobiya. waa la bishaareystay, oo bil Kheer la dhahay. Soomali badan waxaa galay dareen ah in Diblomaasiyada Adiss uu is badal ku yimid, waliba arintaa waxaa sheeegay Yusuf Garaad oo ah Wasiirka Arimaha Dibada ee Soomaaliya, laakin akhrinta Diblomaasiyada & Siyaasada Arimaha Dibada arintaa ma rumeyso, mana u hoggaansanto..
Diblomaasiyada ma qorto naxariis & niyad wanaag toona. Diblomaasiyada casrigana kuma sii jirto, ma,ahan mid ku taagan Qiimaha & Dhaqanka suuban ee Manaahijta waxbarsho lagu barto, mana ahan mid tix-galisa Muqadasaadka Masjidka & Kaniisada laga akhriyo. Diblomaasiyada xilligan waxay ka bilaabataa kuna dhamaataa maxaa dan noo ah…!!! haddana si kastaa oo ay tahay, waxaa hubaal ah in Labada Dal ee Itoobiya & Soomaaliya aysan ka maarmeyn wada noolaansho ku dhisan is daneysi aan cidna dhib ka soo gaareyn.
Soomaaliya xaalka ay hadda ku jirto malahan Dowlad awood badan, mana hanan karto amniga gudaheeda, Hoggaanka Dalkuna uma dhaxeeyo wax kalsooni ah. Xaaladdan waa mid fogeyneysa helitaanka Diblomaasiyad wada nolaansho ku dhisan, oo dhex-marta Adiss & Mqudisho. waana qodobka koowaad ee shaki galin kara run-nimada Hadalka Raisulwasaraha Itoobiya,
Itoobiya ayadoo og Xaalka Dalka Soomaaliya & han yarida Hoggaamiyasheeda, waa mustaxiil in si ixsaan ah, oo waliba sahlan ay uga tanaasusho Diblomaasiyadeeda ku wajahan Soomaaliya, Diblomaasiyada kali cunka ah, kana dhigto mid ku dhisan Ixtiraam, Wada nolaansho, xornimo & daneysi siman. Ma jirto sabab arintaa keeneysa, mar haduusan jirin xeeer awodeed dheeli tiran oo khasabay in Diblomaasiyadu noqoto mid Positev ah, oo leh dheef & dan siman.
Madaxweyne Farmaajo kolki la doortay, waxaa ku jiray dareen ah in Adiss ay uga hiilisay Musharaxii la tartamayay, waliba ay awoood ku bixisay siduu u kufi lahaa, waxaa ayana xigta oo taa ka muhiimsan Qorshiihi Doorasho ee farmaajo ku helay shacbiyada, kaas oo ahaa Danta Dalka & Dadka, oo ay ugu horeyso tayeeynta Ciidanka Qaran ee Soomaaliya, talaabadan oo ah jawaab taabaneysa Diblomasiyada Xorta ah ee ay Adiss ku maareyso arimaha Soomaaliya.
Xaaladdan uu ku jiray Madaxweyne Farmaajo ayaa qasabaya in safarkiisa Adiss uu noqdo mid u muuqda miro dhal, hadana abuuraya Diblomaasiyad cusub, oo ka duwan tii hore ee ay Adiss ku maareyneysay arimaha Soomaaliya, sidaa darteed waxaa la maleyn karaa in hadalka Raisulwasaraha Itoobiya uuusan ka badneyn Masrixayad la gaarsinayo Caalamka & Bulsahada Soomaaliyeed, si ay u furto waji cusub oo ah wada shaqeyn dhexmarta Labada Hoggaamiye ee Muqdisho & Adiss. Waana natiijo sax u dhaw oo la qaadan karo, haddii dib loo jaleecdo Taariikhda dhaqan ee Diblomaasiyada Adiss ee Soomaaliya intii dalku bur-buray.
Waxaa qiimeyn gooni u baahan qaabka & sida ay noqon karto wada sahqeynta Diblomaasi ee dhex-mari karta Adiss & Muqdisho fatrada xukunka madaxweyne Farmaajo. taa oo mudan in qoraal gooni ah laga sameeeyo wakhtigeeda, si loo gaaro natiijo ah in Diblomaasiyada Adiss ee Soomaaliya ay suuro gal tahay in ay wax iska badalaan & in kale.